यसकारण भयो नागरिकमा आक्रमण – Media Kurakani
यसकारण भयो नागरिकमा आक्रमण
December 21st, 2012 Media Kurakani Archives
सुरुमा नेपाल रिपब्लिक मिडियामा भएको तोडफोड, प्रधान सम्पादक, त्यहाँ कार्यरत अन्य पत्रकार र कर्मचारीमाथि भएको आक्रमण र कुटपिटप्रति प्रति घोर भत्र्सना। मिडिया, मिडियाकर्मी वा अन्य जुनसुकै पेशा व्यवसायमाथि आक्रमण निन्दनीय छ। यस प्रकारका हर्कत गर्नेहरुलाई राज्यले दण्डित गरोस्।
बिहीबार दिउसो नागरिक, रिपब्लिका र शुक्रबारको प्रकाशन संस्था नेपाल रिपब्लिक मिडियामा के भयो ? मिडिया कुराकानीले प्राप्त गरेको जानकारी संक्षेपमा :
बिहीबार दिउँसो करिव साढे १ बजेतिर १२/ १५ जना व्यक्ति निकै अभद्र किसिमले सुनधारा चाइनाटाउनस्थित जेडिए कम्प्लेक्समा रहेका नेपाल रिपब्लिक मिडियाको कार्यालय प्रवेश गरे। उनीहरुको हातमा साप्ताहिक पत्रिका ‘शुक्रबार’ का केही प्रतिहरु थिए। पत्रिकामा छापिएका अर्धनग्न तस्बिर देखाउँदै उनीहरुले रिसेप्सनिष्टलाई ‘तलाई पनि यस्तै बनाइदिउँ ?’ भनेर झपारे।
त्यसपछि उनीहरु ‘किशोर नेपाल खै ?’ भन्दै कड्किन थाले। नागरिक दैनिक तथा शुक्रबार साप्ताहिकका प्रधान सम्पादक नेपाललाई भेट्नासाथ उनीहरुले झम्टे। उनीहरुले नेपालमाथि तीन मुक्का प्रहार गरेका थिए। नेपालमाथि लगातार मुक्का वर्षाउन थालेपछि सुरक्षागार्डले उनीहरुलाई रोक्न खोजेका थिए तर उनीहरुले गार्डलाई पनि छोडेनन्। उनीहरुको कुटाइबाट गार्ड गम्भीर घाइते भएका छन्। उनको ज्याकेट समेत च्यातिएको छ। पत्रकार रुवी रौनियार, पवित्रा सुनार लगायतलाई पनि ‘तिमीहरुलाई पनि यस्तै बनाएर पत्रिकामा छापिदिउँ ?’ भन्दै उक्त समूहले भकुरेको थियो।
उनीहरुले प्रधानसम्पादक नेपाललाई पनि ‘तेरा छोरी बुहारीलाई पनि यस्तै बनाइदिउँ ?’ भन्दै लछारपछार गरेका थिए। आक्रमणकारीको कुटपिटबाट पत्रकार सुदर्शन सापकोटाको मुखमा चोट लागेको छ।
आक्रमणकारी रक्सी गन्हाएका थिएः नेपाल
आफुलाई लछारपछार गर्न आएका आक्रमणकारीको मुखबाट रक्सीको गन्ध आएको प्रधान सम्पादक नेपालले बताए। ‘उनीहरुको मुखबाट रक्सीको गन्ध आइरहेको थियो’, नेपालले भने।
‘शिव सेना नेपाल जिन्दावाद’ भन्ने नारा लगाउँदै आएको समूहले नागरिकको कार्यालय नै कब्जामा लिएर आक्रमणगरेका थिए। शिव सेना नेपालका महासचिव माधव प्रसाद भण्डारी आक्रमणमा संलग्न रहेको भन्दै माइसन्सार डट कमले उनी सहित आक्रमणमा संलग्नहरुको तस्बिर सहित नागरिकमा आक्रमण गर्नेको नालिबेली प्रकाशित गरेको छ। ब्लगमा भनिएको छ – आक्रमण भएपछि प्रचार हुन्छ र त्यही प्रचारबाट अरुलाई सजिलै धम्क्याउन सकिन्छ भन्ने सोच आक्रमणकारीमा हुन सक्छ।
तर यो आशंकालाई पनि पत्याउने भरपर्दो आधार छैन।
नागरिकले सम्पादकीयमा भनेको छ – सञ्चार माध्यममा प्रकाशित सामग्रीमा असहमति भए त्यसको समाधान खोज्ने लोकतान्त्रिक विधि हुन्छ प्रजातान्त्रिक देशमा। तर एउटा अराजक समूहबाट लोकतान्त्रिक विधिको अपेक्षा गर्नु पनि उत्तिकै ब्यर्थ छ। किनकि लोकतन्त्रमा नभई भिडतन्त्रमा विश्वास गर्ने विशेषता यस्ता समूहले बोकेका हुन्छन्। त्यसैले त उनीहरूले असहमतिस्वरूप सोझै हुलहुज्जत र आक्रमणमा उत्रेर त्यही विशेषता प्रदर्शन गरे।
के हो त आक्रमणको कारण ?
नेपाल रिपब्लिक मिडियाले ‘वीरेन्द्रको सम्पत्तिमा ब्रह्मलुट’ शीर्षकको समाचारका कारण नागरिकमाथि आक्रमणभएको दावी गरेको छ। नागरिकका पत्रकारहरुले पनि फेसबुक, ट्वीटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमार्फत यही दावी गरेका छन्।
अनलाइन, पत्रपत्रिका, रेडियो तथा टेलिभिजनहरुले नागरिकमाथि भएको आक्रमणको समाचारमा सन्तुलन गरेको देखिएन। आक्रमणमा संलग्न रहेको भनिएको शिव सेना नेपालको कुरा कतैपनि आएन। यतिसम्मकी आक्रमणको कारण समेत प्रष्ट खुलेन। जसका कारण आक्रमणको कारणबारे नागरिकले गरेको दावी धेरैले पत्याएनन्।
आक्रमणपछि नागरिकले राखेको भिडियो हेर्दा आक्रमणको कारण उसले दावी गरेभन्दा फरक लाग्छ। भिडियोमा देखिनेहरुले बोलेको प्रष्टै सुनिन्छ – ‘यस्तो पत्रिका चलाउन लाज लाग्दैन ? तेरो चेलिबेटीलाई मनपर्छ ? कसैलाई मन पर्दैन।…..’ उनीहरुले अझ बढी नै बोलेका छन्। भिडियो हेर्नुहोस् –
नागरिकले पूर्व राजपरिवारका सदस्यको सम्पत्तिबारे शुक्रबार र नागरिकमा छापिएको समाचारका कारण आक्रमण गरेको दावी गरेपनि यसको वास्तविकता भने शुक्रबारमा छापिने नग्न/ अर्धनग्न तस्बिर नै आक्रमणको मुख्य कारण देखिन्छ।
नग्न तस्बिर, शुक्रबार र प्रेस काउन्सिल
यहाँ, शुक्रबारमा छापिने तस्बिरका बारेको सन्दर्भ जोड्नु उपयुक्त देखिन्छ।
प्रेस काउन्सिल नेपालले शुक्रबार साप्ताहिकलाई नग्न तथा अर्ध नग्न तस्बिर छापेर पत्रकार आचारसंहिता उल्लंघन गरेको भन्दै दुई पटक पत्र काट्यो। पहिलो पटक २०६८ मंसिरमा र दोश्रोपटक २०६९ जेठमा।
२०६८ मंसिर १६ गते प्रकाशित शुक्रबार को पृष्ठ २२ को ‘यौनको खेलमा सेक्स टोयज’ तथा पृष्ठ २९ को ‘पोर्न स्टारको भयानक डिमान्ड’ र ‘किन चाहियो फेसबुक’ शीर्षकका सामाग्रीमा प्रकाशित तस्बिर पत्रकार आचार संहिता २०६० (संशोधित तथा परिमार्जित २०६४) को दफा ४ (२) विपरित भएको भन्दै काउन्सिलले ‘आगामी दिनमा यस्ता तस्बिरको प्रकाशन गर्दा ध्यान दिनु’ भन्दै पत्राचार गर्‍यो।
तर शुक्रबारमा यस्ता तस्बिर प्रकाशनको क्रम जारी नै रह्यो खासगरि पृष्ठ २८ र २९ को गसिपमा।
दिनदिनै उदार र आधुनिक हुँदै गैइरहेको नेपाली समाजमा कुन कुरा ग्राह्य र कुन कुरा अग्राह्य भन्ने विषयको फैसला प्रेस काउन्सिलले गर्ने हो कि वा समाज स्वयंले गर्ने हो ?
काउन्सिलले शुक्रबारको प्राय हरेक अंकको पेज नम्बर २८ र २९ गसिप अन्तर्गत नेपाली संस्कृति, संस्कार र सभ्यतालाई चुनौति दिने गरि र पत्रकार आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने गरी अर्धनग्न र नग्न तस्बिरहरु प्रकाशित गरेको भन्दै २०६९ जेठ १४ गते नागरिकलाई पत्र काटेको थियो।
काउन्सिलले स्वस्थ र मर्यादित पत्रकारिताको विकास गर्न अनुरोध गर्दै गरेको पत्राचारको जवाफमा यसका सम्पादकको प्रश्नात्मक जवाफ यस्तो थियो – दिनदिनै उदार र आधुनिक हुँदै गैइरहेको नेपाली समाजमा कुन कुरा ग्राह्य र कुन कुरा अग्राह्य भन्ने विषयको फैसला प्रेस काउन्सिलले गर्ने हो कि वा समाज स्वयंले गर्ने हो ?
प्रधान सम्पादक नेपालले शुक्रबारको २०६९ असार १५ को अंकमा ‘यस्तो पनि हुँदो रहेछ’ शीर्षकको लेखमा प्रेस काउन्सिलले पूर्जी काटेरै शुक्रवारलाई नैतिक शिक्षा दिने अनाधिकार जमर्को गरेको र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा एउटा जिम्मेवार प्रकाशन संस्थाको प्रकाशनमाथि अंकुश लाउन खोजेर प्रेस काउन्सिलले साँच्चै अदभूत काम गरेको टिप्पँणी गरेका थिए। लेखको अंश:
शुक्रवारकै सन्दर्भमा, शुक्रवारलाई अपराधी मानेर कुरा गर्ने हो भने पनि कान्तिपुर शहरका नैतिक चरित्रवान् भलाद्मीहरूको असली स्वरूप छर्लंग देखिनेछ। यी भद्रभलाद्मी हातमा एप्पलको आई-प्याड र सामसुंगको ट्याब बोकेर दिनभर सरकारी वा निजी कार्यालयको वाइफाईको सहाराले नग्न सुन्दरीहरूको फोटो हेर्छन्, रमाउँछन् र आफ्नो समृद्धिमा मख्ख पर्छन्। त्यतिले नपुगेर कलकत्ता र क्वालालम्पुरबाट ‘प्लेब्वाई’, ‘पेन्टहाउस’ लगायत विभिन्न पत्र-पत्रिकाका अन्तर्राष्ट्रिय संस्करण मगाएर घरको लाइब्रेरीको शोभा बढाउँछन्। तर, शुक्रवार जस्तो सामाजिक रूपले जनताको मनोरञ्जनको भोक मेटाउँदै पत्रकारिताको दायित्व पूरा गर्ने प्रकाशनको विरोध गरेर उनीहरू पानीमाथिको ओभानो बन्छन्।
शुक्रवार ती सामान्य मानिसका लागि ज्ञान र विशुद्ध मनोरञ्जनको त्यस्तो प्याकेज हो, जो घण्टाको पन्ध्रबीस रुपैयाँ तिरेर साइबर क्याफे जाने र आत्मरति गर्ने आर्थिक क्षमता राख्दैनन्। यो मनोरञ्जन र ज्ञानका ती भोका पाठकहरूको साप्ताहिक खुराक हो, जो संसारका विभिन्न सेन्टरबाट चिप्ला कागजमा छापिएर प्रकाशित हुने महँगा विदेशी म्यागजिन किनेर पढ्न सक्दैनन्। यो त्यस्ता मानिसहरूको पत्रिका हो, जसले उनीहरूसँगको अन्तर्वार्ता र उनीहरूको अभिव्यक्ति प्रकाशित गरेर ज्ञानको ढोका खोलिदिएको छ। गरिब र सीमित आयस्रोत हुने व्यक्तिहरूको मनोरञ्जनको चासो लिएको छ शुक्रवारले। पुरा लेख पढ्नुहोस्ः यस्तो पनि हुँदो रहेछ
जसले जेसुकै तर्क वा दावी गरेपनि शुक्रबारमा छापिएका नग्न अर्धनग्न तस्बिरकै कारण आक्रमण भएको बुझ्न गाह्रो छैन। तर नागरिकले नै अन्य समाचारका कारण आक्रमण भएको भनेर किन प्रचार गर्दै छ त्यो चाहीँ बुझिनसक्नु छ।
राम्रो नराम्रो छुट्याउने जिम्मा समाजको हो भने हिजो भएको आक्रमणलाई पनि समाजले नै गरेको भन्ने ? खासमा के हो समाज ? के हो यसको सीमा ? कतिसम्मलाई श्लील भन्ने ? केलाई अश्लिल भन्ने ? यसको मापदण्ड के ? बहस गरौँ।
मिडिया तथा मिडियाकर्मीमाथि हुने आक्रमण कुनैपनि हालतमा सैह्य छैन। यसको बिरोध गरौँ।
Tags Kishore Nepal Nagarik Daily Nepal Republic Media
अन्ततः खिलानाथ ढकालले नागरिक छोडे »
« हिमालखबर, फेक ट्वीटर र हल्लाकारिता